यौनप्यास मेटाउन आएको त्यो युवा स्तनपान गरेर फर्कियो, मैले नजन्माएको त्यो ‘छोरो’ आज कहाँ होला ? • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
सुनिता दनुवार/एक पटक एउटा अनौंठो घटना भयो । सायद कोठीहरुमा अपवादका रुपमा हुने घटना । एकपटक हाम्रो बंगलामा मोजमस्तीका लागि कलेजका केही केटाहरु आएका थिए । ती केटाहरु आ आफुले मन पराएका केटीहरु बोकेर कोठामा गए । ती मध्येकै एउटा केटाले मलाई राज्यो र मेरो कोठामा आयो । त्यती बेला म कलिलै थिएँ । भर्खर बच्चा जन्मिएकाले मेरो स्तनबाट दुधका धारा चुहिरहेको थियो । निपल अलिकति निचोर्दा नै दुध चुहिन्थ्यो । कलेजको त्यो भर्खरको केटाले छातीमा त्यसरी दुध बगेको देखेछ । उ निकै आश्चर्य चकित भयो । उसल्यो भन्यो, ‘मलाई तिमिसंग अरु केही गर्नु छैन । बस मलाई यो दुध खान देऊ ।’ ‘के नचाहिदो कुरार गर्छौ ! ?’बरबराउँदै भनें, ‘क्या ! खुस्केटहरु आउँछन्
दुध चुसेर ‘छोरा’ गइहाल्यो, तर त्यो अनौठो घटनाले यता ‘आमा’लाई पछिसम्म पिरोली रह्यो, भावुक बनाइरह्यो । आखिर त्यस्ता उच्च चेतना भएका मानिसहरु पनि कहिलेकाँही बरालिएर कोठीसम्म आईपुग्दारहेछन् र आफ्नो विवेक, करुणा र प्रेम प्रकट गरेर जाँदा रहेछन् । मैले नजन्माएको त्यो ‘छोरो’ आज कहाँ होला, मलाई थाहा छैन । तर जँहा भए पनि त्यो छोरालाई यो आमाको सदा आर्शिवाद रहने छ । सुनिता दनुवार द्धारा लिखित आँसुको शक्तिबाट